Manomboka ny “drafitra dimy taona faha-14”, nanafaingana ny fananganana “tanàna” i Fuzhou - China Foshan Hermes Steel
Manomboka ny “drafitra dimy taona faha-14”, nanafaingana ny fananganana “tanàna” i Fuzhou
Herinandro lasa izay, tetikasa 21 ao amin'ny Luoyuan Bay Port Area an'ny "Silk Road Seaport City" any Fuzhou no vita sonia, miaraka amin'ny fampiasam-bola mitentina 35,4 miliara yuan (RMB, mitovy eto ambany ihany). Anisan'ireny, ny tetik'asa fotodrafitrasa vy vaovao avo lenta natokana ho an'i China Baowu Taiyuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd., miaraka amin'ny fampiasam-bola mitentina 10 miliara yuan, dia hanangana vokatra butika 3,22 tapitrisa taonina ao Luoyuan Bay, miorina amin'ny maridrefy Baosteel Desheng efa misy. Entana vy tsy misy vy.
Ny tompon'andraikitra eo an-toerana dia nilaza tamin'ny mpitati-baovao China News Agency tamin'ny faha-8 fa ity fifanarahana afovoany ity dia hanafaingana ny fanavaozana ny indostrian'ny vy any Luoyuan Bay ary hanafaingana ny fampiroboroboana ny "Silk Road Seaport City" hananganana toby indostrian'ny bizina vy tsy misy fangarony.
Ny "Silk Road Seaport City" miakatra tsikelikely ao Fuzhou dia microcosm an'ny fanamboarana "tanàna" haingana an'i Fuzhou. Rehefa avy niditra voalohany tao amin'ny "club GDP mihoatra ny iray tapitrisa tapitrisa dolara" i Fuzhou, dia nanohy nitombo hatrany hatrany ny ezaka, ka nanao izay ezaka rehetra natao hikitika ny "tsatokazo fitomboana", nanangana foibe "Haisi" ary miezaka ny ho lasa tanàna afovoany nasionaly.
Ny "Drafitra dimy taona faha-14" dia nanomboka. Nohazavain'i Fuzhou mazava fa ao anatin'ny dimy taona ho avy, hifantoka amin'ny fananganana "tanàna" enina toa an'i Fuzhou Binhai New City, Fuzhou University City, atsimo-atsinanana Auto City, Silk Road Seaport City, Fuzhou (Changle) International Aviation City , ary Tanànan'ny Logistics Modern. Naneno ny "antso fivoriambe" mba hanafainganana ny fananganana tanàna iraisam-pirenena maoderina.
Araka ny drafitra, ny “tanjona kendrena mafy” ho an'ny fampandrosoana an'i Fuzhou mandritra ny “Drafitra Dimy Faha-14” dia: ny fahazoana fiakarana vaovao amin'ny haavon'ny angovo renivohitra, hiezahana hitazona ny tahan'ny fitomboana 7% isan-taona amin'ny harinkarena faobe, faritra namboarina sahabo ho 500 kilometatra toradroa, ary mponina maharitra an-drenivohitra misy olona 500 alina, ny maha-lohalaharana ny renivohi-paritany sy ny hery manosika ny taratra dia nitombo be.
Huang Maoxing, dean ao amin'ny School of Economics an'ny Fujian Normal University, dia mino fa ny fananganana tanàna maoderina enina dia hanome tosika maharitra ny fitomboana antonony sy haingam-pandeha ao Fuzhou.
Tamin'ny fiandohan'ny taona vaovao dia voaroaka tanteraka ny fananganana tanàna maoderina enina any Fuzhou. Any amin'ny faritra atsimo atsinanana misy ny tanànan'ny tanànan'i Minhou, tanànan'i Fuzhou, ny tetik'asa fanitarana sy ny fanarenana ny lalam-paritany 203, ny tetikasa Lanpu Industrial Park Project, ary ny tetikasa Dongtai High-end New Material Industrial Park dia miha haingana. Ye Renyou, sekreteran'ny Komitin'ny Antoko County Minhou, dia nanipika fa ny fanangonana vondronà tetik'asa manohana fiara lehibe sy tsara dia hampisy rojika matanjaka hamenoana ny indostrian'ny fiara, hanitatra bebe kokoa sy hanamafisana ny indostrian'ny fiara, ary hanao ny ezaka rehetra hananganana tanànan'ny fiara atsimo atsinanana miaraka amin'ny fampivoarana ny olona, ​​ny indostria ary ny tanàna.
Tao Binhai New City of Fuzhou, tetikasa Fujian Berry Hekang Digital Life Industrial Park (Phase II) dia natomboka tato ho ato, miaraka amin'ny fampiasam-bola mitentina 1,678 miliara yuan, mifantoka amin'ny fikirakirana rahona, ny filaharana gén, ny fanitsiana ny gen, ny faharanitan-tsaina artifisialy ary ny haitao teknolojia avo lenta hananganana foibe angon-drakitra sy famokarana Base, ivon-toerana R&D, ary valan-javaboary ara-pahasalamana sy hazakazaka miasa manontolo andro aman-jery maro miasa. Ity dia iray amin'ireo andiany voalohany amin'ny tetikasa lehibe ao amin'ny faritanin'i Fujian izay nanomboka ny fananganana ifotony tamin'ny fanombohan'ny vanim-potoana "Planina Dimy faha-14".
Hanafaingana ny fananganana "tanàna", ary hanasongadina ny fanohanana indostrialy i Fuzhou. Tamin'ny resadresaka nifanaovana natao dia nanambara ny ben'ny tanànan'i Fuzhou You Mengjun fa ny indostria no fanampiana lehibe indrindra hampiroboroboana ny fampandrosoana avo lenta amin'ny fomba rehetra, ary ny fanavaozana no hery voalohany mitondra.
Raha miverina mijery ny “Drafitra Dimy ambin'ny folo taona fahatelo ambin'ny folo” isika, noho ny firoboroboan'ny vondrona indostrialy 100 miliara lehibe indrindra toa ny lamba, ny fibre simika ary ny fihinan'ny indostria maivana dia antenaina mihoatra ny 1,1 trillion yuan ny sandan'ny vokatra indostrialy Fuzhou . Manoloana ny “Drafitra Dimy Faha-14”, hanohy hihazona ny “niubi” ao amin'ny indostria i Fuzhou ary tsy hiala sasatra, hanampy amin'ny fisarihana mpitarika lehibe, hamboly cluster lehibe, ary hampivelatra indostria lehibe.
Ny tombony azon'ny Sinoa sy Taiwanese ampitan-dranomasina koa dia manampy betsaka an'i Fuzhou hanafainganana ny fananganana "tanàna". Fuzhou dia tanàna fantatry ny Shinoa ampitan-dranomasina ary tranon'ny razana mpiray tanindrazana amin'i Taiwan. Misy olona mihoatra ny 4 tapitrisa any ivelany any amin'ny firenena sy faritra 177 manerantany. Huang Maoxing dia mino fa ny fanangonana betsaka ny fahendrena sy ny tanjaky ny mpiray tanindrazana ao an-trano sy any ivelany hiezahana hanana kapital sy talenta ary teknolojia bebe kokoa ao an-trano sy any ivelany hivory ao Fuzhou dia hanafaingana ny fananganana tanàna maoderina enina ao anatin'izany ny tanànan'i Fuzhou Binhai New City, atsimo atsinanana Auto City , sy ny City Silap Seaport City. Amporisiho ny "cycle cycle" ary aroso ny lamina fampandrosoana vaovao. (Vita)
Fotoana fandefasana: Mar-19-2021